Tag: bandhigyo | Martech Zone
Xara: Ku Abuur Dukumiintiyo Suuq-geyn Muuqaal ahaan Daqiiqado ah
Sabtida, Maarso 16, 2019 Jimce, Maarso 15, 2019 Douglas Karr
Ma jirto maalin ay i ag socoto oo aanan ka shaqeynayn Sawirqaade, Photoshop, iyo InDesign oo waxaan si joogto ah ugu jahwareersanahay la'aanta joogteyn la'aanta qalab kasta. Waxaan ka helay qoraal kooxda Xara toddobaad ka hor si aan u qaato mashiinkooda daabacaadda ee internetka tijaabinta tijaabada. Oo anigu gebi ahaanba waan la dhacay! Xara Cloud waa qalab casri ah oo casri ah oo loo sameeyay kuwa aan naqshadeeyayaasha ahayn ee sameeya abuurista ganacsi muuqaal iyo xirfadba leh iyo suuqgeyn
Dhuumaha Iibinta ee B2B: Ku rogida Macaamiil
Axad, Juun 27, 2014 Douglas Karr
Waa maxay dhuumaha wax iibiya? Labada ganacsi ee ganacsi (B2B) iyo ganacsiga macaamiisha (B2C) adduunka, ururada iibka waxay ka shaqeeyaan sidii loo qiyaasi lahaa tirada hogaamiyaasha ay hada isku dayayaan inay u badalaan macaamiisha. Tani waxay siisaa iyaga saadaal ah inay gaarayaan yoolalka ururka maaddaama ay ku saabsan tahay tirinta iyo qiimeynta. Waxay sidoo kale siisaa waaxaha suuqgeynta dareen deg deg ah sida ay tahay
Monday, June 30, 2014 Khamiis, Juun 3, 2014 Douglas Karr
Kani wuxuu ahaa infographic xiiso leh oo aan doonayay inaan la wadaago Wolfgang Jaegel. Kaliya maahan sababta oo ah waxay bixisaa aragti ku saabsan waxa istiraatiijiyad suuq-geynta suuqgeynta ay geynayaan suuqleyda B2B, laakiin farqiga aan u arkaayo waxa loo dirayo iyo waxa saameynta xeeladahaas ay noqon karaan. Si caan u ahaanshaha, liistadu waa warbaahinta bulshada, maqaallada ku yaal boggaaga, joornaalada, joornaalada, dhacdooyinka qofka, daraasadda kiisaska, fiidiyowyada, maqaallada ku saabsan
Runta dhabta ah ee ku saabsan Meheraddaada iibka
Isniin, February 17, 2014 Axad, Oktoobar 4, 2015 Jenn Lisak Golding
Marka ugu horeysa, waxaan jecel nahay kafaala qaadayaasheena PaperShare, oo maktabaddeenna maktabadda ku wada kallifay dhammaan joornaaladayada maal-galiyayaasha iyo ebook-yada. Waxaan lahaa qarax ka shaqeeya infographic iyaga la. Intii aan ku guda jirnay howshan, waxaan u guda galnay sababta suuq-geynta nuxurku mar dambe u noqon karin hal kanaal suuq-geyn ah; runti waa aasaaska awood u leh dhammaan dadaalada suuq geynta. Sababtoo ah, waad weydiin kartaa? Hagaag, tirakoobkaan ayaa lagayaabaa ama lama yaabin. Sida laga soo xigtay Go'aannada Sirius: B2B